Matahotra i Kremlin Fa Mampitombo Kokoa Ny Lazan’ireo Lehiben’ny Mpanohitra ny Fanafihana Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Matahotra i Kremlin Fa Mampitombo Kokoa Ny Lazan'ireo Lehiben'ny Mpanohitra ny Fanafihana Azy Ireo
Voadika ny 03 Mey 2017 12:59 GMT
Sary: Alexei Navalny, Twitter
Andro vitsy taorian'ny nanondrahana indray tamin'ny zava-maitso mamono otrikaretina ny lehiben'ny mpanohitra sady kandidà filoham-pirenena Alexei Navalny tamin'izy handeha hamonjy lanonana tany Moskoa, nitatitra ny tranonkalam-baovao Gazeta.ru fa nanome toro-lalana ho an'ireo manampahefan'ny faritra i Kremlin mba hanasazy ny fanafihana tahaka izany amin'ny manaraka.
Nitanisa loharanom-baovao avy tao Kremlin ny Gazeta.ru ary nilaza fa ny fanafihana an'i Navalny sy ireo mpanohitra hafa tamin'ny zavatra mamono otrikaretina “maitso mamiratra”», fantatra ho «zelyonka» ao Rosia, dia manome dokambarotra maimaim-poana ho an'ny mpanohitra sy mampitombo ny lazany manerana ny firenena. “Raha ny marina, mampitombo ny lazan'izy ireo ny fanafihana”. Norisihana ireo manampahefana misahana ny fampiharan-dalàna mba hanenjika ny fanafihana ary hanasazy ireo nahavita ny fanafihana, hoy ny loharanom-baovao.
Dokambarotra ho an'i Alexei Navalny
Nampidirina hopitaly i Navalny tamin'ny Alakamisy rehefa nanondraka zelyonka taminy tao ivelan'ny biraony ao Moskoa ny mpanafika iray. Tamin'ny Alahady, nanoratra tao amin'ny tranonkalany izy fa mbola mitsabo ny masony havanana, voatondraka nandritra ny fanafihana, ary matahotra izy fa mety ho jamba ny masony ilany.
Nanjary nitombo tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa ny fanafihana amin'ny Zelyonka ary lasa loko tsy ofisialy ho an'ny fampielezan-kevi-pifidianana filoham -pirenena 2018 an'i Navalny sy ny mpanohitra anti-Potinina marobe ny loko maitso mamiratra. Nandoko ny tavan'izy ireo tamin'ny loko maitso ireo mpanohana an'i Navalny ho mariky ny firaisan-kina, ary niezaka nampiasa ny fanafihana ho fomba hanentanana ireo mpilatsaka an-tsitrapo.
Araka ny loharanom-baovao iray tamin'ny Gazeta.ru, ny fanafihana vao haingana an'ilay bilaogera malaza Ilia Varlamov tao an-tanàna atsimon'i Stavropol tamin'ny 26 Aprily no “herikerika nahatonga ny todra-drano”. Hatramin'ny nisian'ny fanafihana, nahatratra mpanafika dimy ny manampahefana mpitandro ny filaminana, na dia nilaza aza i Varlamov fa folo ny olona nanao izany.
Toa miha-mitombo ny fanafihana. Notafihan'ireo andian-dehilahy tao an-tanànan'i Samara ilay bilaogera malaza Tema Izgaguine omaly.
Omaly tao Yekaterinburg, narahan'ireo jiolahimboto i@itema_Tv rehefa avy nanatrika ny fihetsiketsehana anti-Potinina, nanakana azy sy nanondraka famonoana otrikaretina.
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy i Navalny tamin'ny alahady fa ny Kremlin no tao ambadiky ny fanafihana azy, fiampangana iray izay nolavin'ny loharanom-baovao Gazeta.ru ankitsirano. Na izany aza, nametra-panontaniana kosa ny tatitry ny Gazeta.ru mikasika ny filazana fa miasa noho ny baikon'ny manampahefana any ifotony sy any amin'ny faritra ireo mpanafika. Indrindra indrindra, nisarika ny saina ny loharanom-baovao iray fa maro tamin'ireo nahavanon-doza no fantatra fa avy ao amin'ny faritra manodidina izay nanaovan'izy ireo ny fanafihana, izay mametraka fa misy fandrindran'asa ao.
Loharanom-baovao hafa kosa nilaza fa niasa irery tsy niankina tamin'iza na iza ireo mpanafika sy noho ny faharesena lahatra manokana fa manohintohina ny fanjakana i Navalny sy ny mpanohitra hafa.
Jereo ao amin'ny Twitter ny sary
Tsy fantatry ny Fitantanan'ny Filoham-pirenena izay nanondraka famonoana otrikaretina maitso tamin'ny mason'i Navalny
Ny ahiahian'i Kremlin amin'ny fitomboan-dazan'ny mpanohitra noho ny fanafihana dia nifanojo tamin'ny fitomboan-dazan'i Navalny: mpilatsaka an-tsitrapo teo amin'ny 100.000 teo no nisoratra anarana hiasa hanao fanentanana ho filoham-pirenena an'i Navalny, mampiseho fa mety malaza kokoa tsy araka ny niheveran'ny maro azy taloha ny hetsika ara-politikany.
Mpikambana ao amin'ny Antoko:
#Rosia Mitambatra: ~2 tapitrisa
LDPR (Antoko Liberaly Demokraty ao Rosia) ~180.000
Just Russia ~410.000
Mpilatsaka an-tsitrapo nisoratra anarana ho an'i @navalny : ~95.000
Eny tokoa, toa nampitombo ny fankasitrahana teo amin'ny Rosiana ny hafatra miady amin'ny kolikoly avy amin'i Navalny. Tamin'ny 26 Marsa, olona an'aliny no nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana miady amin'ny kolikoly natao manerana ny firenena izay nokarakarain'i Navalny, fihetsiketsehana goavana indrindra manohitra ny governemanta tao Rosia hatramin'ny taona 2011-2012.